Comment (1770) Hits: 8848
Comment (3018) Hits: 17281
Comment (3331) Hits: 36148
Akeeka Radioo Sagalee Qabsoo walabummaa Oromiyaa
Akeekni Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa (RSQWO) kaayyoo qabsoo walabummaa Oromiyaa kan Oromiyaa waanjoo kolonii habashaa jalaa baasee, biyya walabaa fii uummata bilisa dhugoomsuuf carraaqu gargaaruu fii jajjabeessuu dha.
Kana bakkaan ga’uuf sagantaa raadiyoo dhimma armaan gaditti tarreeffaman irratti xiyyeefatu Oromiyaa keessaa fii alatti tamsaasa.
Odeeffannoo dogoggoraa fii oloola qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofamu hunda, burqaansaa hawaasa Oromoo haa ta’u yookiin alaagaa (kan akka oftuultota habashaa yeroon itti darbee fii firoota saanii hundaa) dura dhaabachuu.
Oduu biyya keessaa, biyya alaa fii oduu Oromoo laallatu dhiheessuuf xiinxala isaas dabarsuudhaan, akeeka uummata Oromoo hubachiisuu jedhu irratti xifachuu.
Ilaalcha dogoggoraa fii gowwoomsaa garee dhaabolee siyaasaa Oromoo irraa harca’aniin yeroo dhihoo asitti baballachaa jiru saaxiluu, akkasumas, ilaalcha warra waan ani jedhe malee hinta’u jedhan, ofittoofii of-mormitootaa kan qabsoo sabni keenya koloneeffattoota Itiyyophiyaa jalaa bilisa of baasuuf taasisutti gufuu ta’u saaxiluu.
Comment (238) Hits: 17884
Comment (1818) Hits: 12617